Ihe Nleta A na-akpọ Coil Straightener Maka Stamping metal China Manufacturer
Nkọwa:Lzọ Nri oriri,Ngwunye Ngw’oru Ngw’oru Elu,Lzọ Nri Omenala
Home > Ngwaahịa > Nri Cost Straightener > Ahịrị nri > Ihe Nleta A na-akpọ Coil Straightener Maka Stamping metal
Ihe Nleta A na-akpọ Coil Straightener Maka Stamping metal
Eriri igwe STRAIGHTENER feeder IHE metal zọ
Kọmpat coil feed line mejupụtara onye ndozi ya na nkeji ụgbọ ala, ihe na - enye ihe na - enye ihe eji edozi ya na igwe na - akpacha ajị anụ bụ nnukwu ngwaahịa na ahịa mba ụwa na ewu ewu na ndị ahịa anyị.
Ọnụ ego nhazi nke ụlọ ọrụ na-agba ụkwụ na-akawanye mma. Ya mere, ụlọ ọrụ stampụ na-agba mbọ belata ụgwọ nrụpụta, na-agbanwe teknụzụ nhazi, na-abawanye akụrụngwa iji rụọ ọrụ arụmọrụ ma belata ụgwọ ọrụ ọrụ. Onye na-enye ihe oriri atọ nwere arụmọrụ kwụsiri ike, ọnụahịa dị ọnụ ala na ntinye mfe. Ọ bụrụla ihe ndị achọrọ maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịnabata ya.
Mkpịsị eriri igwe na-enye nri dị mfe ịwụnye, nke nwere ike ịbanye na mmepụta oke na obere oge. Enweghị ogologo akụrụngwa, eriri coil na-enye nri ogologo agaghị adịkarị 5m, ụfọdụ ụdị bụ naanị 2.5m ogologo, nke ga-echekwa ọtụtụ ebe ọrụ nke ụlọ stampụ. Site na ihe eji agba ahia ahia mba nile, sisitemu akpukpo aru na usoro nyocha nke onwe, komputa nri na –eme ihe di nfe ma di nfe.
Irikọ nri ọnụ abụghị naanị ngwakọta nke uncoiler, straightener, na feeder kamakwa ejikwa ikike arụ ọrụ nke ukwuu. Ebe a na-ejikọ hydraulic, ụgbọ coil, na-ekpughere moto, spindle na inverter, akụkụ kwụ ọtọ, servo feeder moto na-ejikọta ya na sistemụ modulu nke PLC ma na-ejikwa ihuenyo mmetụ na-achịkwa, nke dị mma maka ndị ọrụ.
Onye na-enye nri na-enye ihe ndozi eriri ụzọ nwere ike ime ka ihe ndị na-enye nri na-ekezi ụzọ atọ nwere ikike ijikwa ọkụ eletrik, na-ejikwa sistemụ mechiri emechi emebere ọnụ nke PLC.
Ngwa a na-esi edoziri ihe ndị na-enye ihe ndozi na-enye ihe sara mbara karịa ụdị ndị ọzọ. Ọ nwere ike ijikwa akwa nchara na kwa igwe anaghị adị na oke ọkpụrụkpụ. Ọ nwere ike ijikwa ọkpụrụkpụ nchara ruo 12.0mm coil obosara ruo 1800mm na arụ ọrụ ọfụma dị elu. Iri igwe ihe eji achọ ihe eji achọ ihe eji arụ ya bụ ihe eji arụ ụlọ, ihe eji arụ ụlọ, ma ọ bụ rụọ ọrụ eletriki.
Akụkụ ụgbọ ala: Braket, Damper, Barke Pad, Tie Bar, Rail of slate car car, Splash Shield of body car, Air bag Component - Diffuser, Comatent oche, ihe ndoro ndoro ochichi, ogwe uzo, ogwe uzo, ogba ebe nchekwa, oche Akụrụngwa & Brake, Automotive ABS Components, ABS ihe mmetụta, nchekwa nchekwa, akpa mmanụ dị ọcha na wdg.
Akpaaka 3 na 1 Straightener Feeder na Nc Servo Feeder Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-ahụ maka ike Press Nc Servo Feeder Uncoiler Straightener Kpọtụrụ ugbu a
Lzọ Nri oriri Ngwunye Ngw’oru Ngw’oru Elu Lzọ Nri Omenala Ineszọ Nri nri Pịa Nri nri Kọlụm nri nri Nri nri Iri nri nri